Qaybta 1. Sida loo saar Music ka Computer si ay Samsung Galaxy S5
Qeybta 2: Sida loo celi Samsung Laptop Windows Password
Qaybta 3. Sida loo saar Music ka iCloud in Samsung Galaxy S5
Qaybta 4. Sida loo saar Music ka Qalabka kale ee Samsung Galaxy S5
Waxaad ayaa ugu danbeyn helay aad Samsung S5, oo aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xogta oo dhan ku yaal. Ka dib markii ay isku dayayaan in ay sidaa sameeyaan, inaad ku gaadhaan danihiina ma aha in si sahlan. Kala beddelashada music ka iCloud in aad Samsung S5 laga yaabaa in dhib badan, waxay u muuqataa. Ka dhig wax akhriska si aad u ogaato sida loo ka your computer, Lugood, iCloud, iyo qalab kale si ay Samsung S5 wareejiyo music.
Kala beddelashada music ka your computer in Samsung S5 waa u fududahay. Halkan waxa ku jira talaabooyin fudud.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay in aad samayso waa la furo daboolka oo ku yaalla xagga hoose ee aad telefoonka.
Markaas, qaado cable USB iyo xirmaan hal dhinac la telefoonka, iyo dhinaca kale la your computer. Marka aad sidaas samayso, waxaad heli doontaa ogeysiin ah oo ku saabsan telefoonka. Slide hoos bar ogeysiis aad (slide ka laayeen sare ee phone), oo waxaad arki doontaa in aad Samsung S5 xiran yahay sida qalabka warbaahinta ah.
Riix badhanka this, iyo menu cusub u furi doonaa. Waxaa jira, waa in aad hubiso in aad telefoonka ku xiran sida qalabka warbaahinta ka dhigi.
Hadda, halkaas weeye meesha kala iibsiga file bilaabmin. Tababare Open File (Windows Explorer) on your computer.
Tallaabada xigta waa in la furo gal ah taas oo ka kooban files music aad.
Ka dib markii xulashada faylasha aad si fudud ku dhaqaajiyaan karaa in "saari Disk" (taas oo aad telefoonka). Waa la arki karaa dhanka bidix, hoos icon kombiyuutarka. Ama, waxa aad furan kartaa "saari Disk" oo ka heli folder la odhan jiray "Music" iyo waxaa nuqul aad heeso.
Qaybta 2. Sida loo saar Music ka Lugood in Samsung Galaxy S5
Kala beddelashada music ka Lugood in Samsung Galaxy S5 waa sida ugu fudud ee tutorial hore. Markan, aad leedahay si aad u hesho gal ah taas oo ka kooban aad music Lugood. Waxaa sida caadiga ah waa mid ka mid ah kuwan soo socda:
Ka dib marka aad sidaas samayso, hubi in ay ku soo celiyaan tallaabooyinka ka kor ku xusan.
Laakiin, marmarka qaarkood habkan waxaa laga yaabaa in wax yar caajis ah. Waqtiga si aad u hesho fayl ah, dooro gabayada la doonayo Waxay qaadataa. Maxaa dhacaya haddii aan idiin sheegay waxaa jira qalab yar oo kooban oo ka dhigi kara nolosha fudud? Waxaa lagu magacaabaa Wondershare MobileTrans.
Wondershare MobileTrans Waa software ah oo kuu ogolaanaya in aad si fudud music (ama nooc kasta oo kale oo file) wareejiyo ka your computer, iCloud, Lugood, macruufka iyo madallo kale oo si toos ah u Samsung Galaxy S5 (ama telefoon kale oo Android).
Wondershare MobileTrans waxaa isticmaali kara qof kasta oo si fudud uma baahna xirfado gaar ah si ay uga shaqeeyaan barnaamijka. Software la yaab leh ma laha qalooca uga yaacday ilaa waxbarashada, iyo idin ​​Toosiya nidaamka oo dhan wareejinta xogta hab fududeeyey.
Waa kuwan tallaabooyinku yar oo sahlan sida laga soo Lugood wareejiyo Android.
Tallaabada ugu horreysa waa Lugood aad furitaanka.
Markaas, waxaad samayn kartaa playlist ah oo lagu magacaabo MobileTrans ama wax kale oo aad jeceshahay. Waxaa jira, si fudud u saaray heesaha oo dhan aad rabto laga soo wareejiyay Lugood in Samsung Galaxy S5.
Markaas, u furan Wondershare MobileTrans iyo doortaan "Soo Celinta ka hayaan" doorasho, iyo dooran Lugood.
Ka dib markii aad si, xirmaan telefoonka, dooran heeso aad rabto in aad nuqul ka, iyo riix "Start Copy" button. Waxaad dooran kartaa playlist aad hadda abuuray, ama aad ku darto playlists kale.
Sug ilaa nuqul ka baxayo, oo aad samaysay!
Marka aad furto Wondeshare MobileTrans, raadi icon iCloud ah oo laga heli karo in block ugu soo celin. Markaas, galaan xogta iCloud iyo login iCloud. Marka aad gasho, aad uma yeelan doonaan in ay mar kale gasho.
Markaas, hubiyo in xiriir network aad shaqeynaynin si sax ah sameeyaan, oo kala soo bixi gurmad iCloud ah.
Iyada oo ku saleysan xawaaraha internetka iyo baaxadda faylasha aad, markii download kala duwan. Laakiin, mar download waa dhameystiran, xiriiriyaan Samsung Galaxy S5. Markaas, guji "Start Copy" button. Habkan, faylasha lagu soo guuriyeen doonaa gurmad iCloud in qalab aad.
Kala beddelashada music ka qalab kale si ay Samsung Galaxy S5 waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo Bluetooth. Laakiin, ka dib markii files kala duwan waxaa laga yaabaa in xanuun dhab ah qoorta. Oo weliba, kala iibsiga waqti badan qaadan kartaa. Laakiin, waxa haddii qalab uusan haysan Bluetooth? Aynu qaadan iPhone ah, tusaale ahaan. Waxaad lahaa si ay u gudbiyaan music ka iPhone si aad u computer, ka dibna ka computer aad ku Samsung Galaxy S5. Tani oo dhan waxaa la samayn karaa in qasabno yar oo sahlan, adigoo isticmaalaya Wondershare MobileTrans. Waa kuwan sida:
Tallaabada ugu horreysa waa in la furo Wondershare MobileTrans. Markaas, riix Start kana gala telefoonka inay kala iibsiga telefoonka. Tani waa marka aad ku xidhi aad Samsung Galaxy S5 iyo qalab kale. Qalabka kale waxay noqon kartaa telefoonka ah Android, Symbian ama qalab macruufka ah. Marka qalabka ay ku xidhan yihiin, halkan waa sida MobileTrans suuqa kala ekaan.
Hadda, waxaad dooran kartaa macluumaadka aad rabto in aad ka il telefoonka. In kiis, waa Music. Laakiin, sidoo kale sawiro, fariimo iyo faylasha kale loo gudbin karaa, sidoo kale. Ka dib marka aad calaamadeeyay faylasha aad u baahan tahay wareejiyo, guji "Ka bilow Copy."
Iyo, si fiican, in ay tahay! Sidaas fudud, miyaanay ahayn?
Kala beddelashada aad music ka your computer, qalab kale, Lugood iyo iCloud noqon kartaa mararka qaarkood dalbanayaan. Waxay qaadataa waqti iyo mararka qaarkood ma waxaa la xataa samayn karaa. Laakiin, iyadoo la kaashanayo Wondershare MobileTrans wax walba waxaa la samayn karaa in ka yar daqiiqad.
Wondershare MobileTrans Kaa caawin doona inaad ka aaladaha kale ee lagaa music si toos ah aad telefoonka. Laakiin, ma aha oo keliya in ay music. Files badan oo kale oo aad u wareejin karo. Waxaad ku wareejin kartaa xiriirada, fariimaha, jadwalka, sawiro, videos Guda wac, iyo xataa Apps!
Software waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad dib ilaa aad telefoon si aad PC, ka dibna loo soo celiyo files si aad telefoon kale. Waxaad u hagaagsan karo files u dhexeeya telefoonada Android, iPhone, iPad, iPod iyo xitaa telefoonada Nokia. Xogta la raadsan karaa iCloud iyo Lugood in qalab kale oo kasta.
Best 5 Apps kaabta Android
> Resource > Android > Sida loo saar Music on Samsung Galaxy S5